Etu esi echekwa ma ọ bụ yigharịa oge amamọkwa ruru mobile | Gam akporosis
Edebela ọkwa ọkwa dịka otu n'ime ihe omimi nke anyị ama na site na ya niile ificationsma Ọkwa nke anyị ekwentị ngafe n'ụdị ozi, elu okpomọkụ alerts ma ọ bụ a kwuru na Facebook nke otu n'ime anyị kọntaktị n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Dịka anyị enweghị ike ịnọ na ihe niile, oge ụfọdụ anyị na-ekwe ka ọkwa ndị ahụ gafere ka anyị wee chefuo. Ọ dịghị mfe ịenta ntị na ọtụtụ na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta, ngwa izi ozi na ụdị ọrụ ndị ọzọ anyị rụnyere na ekwentị anyị. Mana dịka ọ na-eme n’ụdị ndị a, ọ bụrụ na anyị mara etu esi achịkwa ha, anyị nwere ike ịchịkwa ha ka anyị nwee ike ịgụ ha ma emechaa ma ọ bụrụ na anyị mara etu esi eme ya.
Ekele dịrị ndị mmepe dịka MobiSoc, anyị nwere ihu ọma inwe ike ịnweta ngwa nke ga-enye anyị ezumike ma lekọta ya jikwaa amamọkwa ndị ahụ niile site na-eyigharị oge ha ka ha ga-ahụ mgbe e mesịrị. A-mepụtara ngwa nke na-abịa dị ka nnukwu enyemaka iji jikwaa nnukwu ọkwa niile nke na-abịakwute anyị kwa oge na ekwentị gam akporo anyị. Nnukwu ngwa nke anyị na-agabiga na-esote iji gbanye ya ka ọ na-arụ ọrụ dị ka amara ma na-elekọta itinye oge niile ozi ahụ, ọkwa ihu igwe na ọkwa ndị ọzọ.
1 Wụnye omema Ọkwa Boomerang
2 Nzọụkwụ mbụ
3 Ngwa ndị ga - enwe ikike ịchekwa ma ọ bụ kpọọ ịma ọkwa amị
4 Chekwaa ma mee ka ị mara ọkwa maka oge ọzọ
5 Nyocha vidiyo na otu ọkwa Boomerang si arụ ọrụ
Wụnye omema Ọkwa Boomerang
Ka anyị buru ụzọ gaa wụnye ngwa a nke na-enye anyị ohere ịchekwa ma ọ bụ yigharịrị ọkwa ma kpọọ ya Boomerang ngma Ọkwa. Aha nke onye mmepe meputara nke oma na o puru inwe isi oru nke ngwa a.
Oge anyị malitere Boomerang ificationsma Ọkwa anyị ga-agafe tupu mini ndu nke ọrụ ya. Anyị na-agafe na ihuenyo ndị a iji jide n'aka na anyị pịa bọtịnụ "Kwado". Nke a ga - akpọrọ anyị n ’ihu nnweta“ Ibanye na amamọkwa ”ebe anyị ga - etinyerịrị ngwa ahụ iji gosi ya ọzọ na mpio. Ozugbo emere nke a, pịa azụ ma laghachi na ngwa ahụ.
Ngwa ndị ga - enwe ikike ịchekwa ma ọ bụ kpọọ ịma ọkwa amị
Nzọụkwụ a dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na anyị ga-enwe nhọrọ ịhọrọ ngwa ndị ahụ nke anyị chọrọ ịchekwa ma ọ bụ mara ọkwa ma ọ bụ nanị ka ngwa ahụ na-elekọta ngwa niile. Mmepụta na-atụ aro ka anyị họrọ otu nke ndabara, nke mbụ, ya mere, anyị na-aga na-esote na ihuenyo na «Next».
Anyị ga-agafe tupu ndepụta niile nke ngwa niile na awụnyere. Naanị anyị na-emegharị akwụkwọ na ha ma pịa ngwa anyị chọrọ Boomerang ka ọ jikwaa. Izi ozi, ozi-e ma ọ bụ ngwa mgbasa ozi mmekọrịta bụ ihe a tụrụ aro, mana ọ dị gị n'aka ịhọrọ ndị dabara adaba maka mkpa nke gị. Ọ bụrụ na ị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-eso ụzọ na Instagram, ngwa a nwere ike ịba uru iji lekọta ijikwa ha yana n'oge ahụ ị nwere n'ụbọchị, ị nwere ike ijikwa ha ngwa ngwa na ozugbo.
Họrọworị anyị na-alaghachi gaa na isi ihuenyo nke ngwa.
Chekwaa ma mee ka ị mara ọkwa maka oge ọzọ
Anyị ga adị njikere ka ngwa ahụ jikwaa amamọkwa ndị a niile. Ozugbo mmadụ rutere n'ọkwa ọkwa, ị nwere ike pịa ya ka ọ hụ ozi ahụ, ma ọ bụ mee mmegharị ahụ na aka ekpe ma obu aka nri iju ya. Mgbe ị mere otu n'ime omume ndị a, ị ga - ahụ ọkwa nke abụọ site na Boomerang.
Nwere ike pịa "Chekwa" na ọkwa nke abụọ iji chekwaa otu ozi ị họọrọ ịjụ, ka ị nwee ike ịlele ya n'oge ọ bụla site na menu menu Boomerang. Nhọrọ ozo bu họrọ "Chekwa + Nchetara", nke ị ga-ahọrọ oge mgbe ọkwa ị jụrụ ajụ laghachiri nke ugboro abụọ.
Nke a na ọkwa nke abụọ ugbua ga-apụta site na Boomerang kama nke ngwa mbu, ma o nwere ozi zuru oke ka ị nwee ike ijikwa ya dịka ị hụrụ na ọ dị mma.
Ọ bụrụ n ’ọ bụla ịchọrọ ịbanye na ndepụta nke amataghị ọkwa, a ngwa nwere ike abịa kemfe n'ihi na ị.
Nyocha vidiyo na otu ọkwa Boomerang si arụ ọrụ
Nke a bụ vidiyo nke okike m nke onye ọlụlụ m Francisco Ruiz akọwa dị mfe arụ ọrụ na nhazi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu ị ga-esi chekwaa ma ọ bụ kpoo ọmụma gam akporo ka ị ghara ichefu ha
Mary Nwachukwu dijo
Enweghị ike ịchọta ngwa ahụ na ụlọ ahịa egwu.
Zaghachi Mary Carmen
Nseta ihuenyo onyunyo na Share, ngwa yiri Ndenye Memo site na LG dị irè maka gam akporo niile